आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति, कसरी लिने ? - Dainik Online Dainik Online
आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति, कसरी लिने ?
प्रकाशित मिति : १ माघ २०७८, शनिबार ८ : २७
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकामा अबदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ ।
पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत आवश्यक सबै कागजातसहित फाराम भर्नुपर्नेछ । यसका लागि सुरुमा विभागको वेबसाइट https://www.dofe.gov.np/मा गई अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा सिधै https://feims.dofe.gov.np/Common-Loginमा गएर पनि खोल्न सकिनेछ ।